ဒေါက်တာခင်မောင်ကြီး၏ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစကား – MoeMaKa Burmese News & Media
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးအတွက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာလှည့်လည်၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ စည်းရုံးလှုံဆော် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာကို တွေ့မြင်ရလို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရပါတယ်။
ဒေါက်တာဦးခင်မောင်ကြီး (ယေးတက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာစာသင်ကြားပေးနေသူ၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆၊ ယေးတက္ကသိုလ်၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲတွင် တွေ့ရစဉ်)
← ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အယ်လ်အေမြန်မာများနှင့် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ပွဲ ရုပ်သံမှတ်တမ်း
စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ဆန်ဖရန်Freedom Forum မှာ ပြောကြားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့်ခွန်း →
December 17, 2015 Aung Htet
September 20, 2018 Aung Htet
အင်တာဗျူး မောင်ရစ် နိုင်ငံတကာရေးရာ
2 thoughts on “ဒေါက်တာခင်မောင်ကြီး၏ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစကား”
ဒေါက်တာ ခင်မောင်ကြီး ဆိုတာ အိန္ဒိယမှာ နေခဲ့သူလား- သူဆိုရင်တော့ သိပ်မလွယ်ဘူး။ သာကူးနော် သတိထား။ ဒီမိုကရေစီ သမားတွေ အင်အားကောင်းစဉ်က တက်တက်ကြွာကြွရှိတယ်- ဒီမိုကရေစီ ကျောင်းသားတွေကို- မင်းတို့ အန်ကယ်ကို အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်မြှောက်ပါလားလို့ဇနီးမယားဖြစ်သူက မသိမသာ ရေလာမြောင်းပေးစကားတွေ ပြောခဲ့တယ်။-တဖြေးဖြေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ အခြေအနေ မလှတော့ ကျောင်းသားတွေနဲ့ အတွေ့ မခံတော့ဘူး။ အေအိုင်အာ မှာ အတူလုပ်နေတဲ့ ဒေါ်သန်းသန်းနု တို့ ကို မြန်မာပြည်ပြန်မယ်ပြောပြီး အရေိကန် ကို ထွက်ခွါသွားတာ နောက်မှ ဒေါ်သန်းသန်နု ခမြာသိရှိရပါတယ် ခင်ဗျ။
Yes, he came from India. The same thing happened in New York as the previous comment mentioned. Now the family attended all receptions by Burmese Embassy in New York. Changing colors all the times is not inspirational. Now, they want to close to Daw Su.